downloads 27 825
Jeff Dobbing (lee esonụ readme file)
Grumman F-14B Tomcat na 4 textures. Ọ bụ nnọọ dị mma! Ihe niile na-esere. Nnọọ elu mma. -Agụnye omenala ụda, clickable virtual kokpiiti na zuru 2D panel. Press L iji rụọ ọrụ burners mmetụta.
The Grumman F-14 Tomcat fighter ugbo elu onboard variable jiometrị. E mere iji chebe ndị nsoro nke keikuku ọgụ, ọ bụ nke mbụ fighter e mere na United States iwekota n'ihe ndị Vietnam Agha. Ọ ama ererimbot ama ke 1986 ekele nkiri Top égbè na Tom Cruise.
The F-14 e mere iji dochie naval version nke F-111, F-111B. Mmepe nke F-111B e nká hapụrụ n'oge 1968, mgbe ọ dị ka ngwaọrụ, oke buru ibu na arọ ka a ghakwara ịnọ arụmọrụ site na ugbo elu ụgbọelu. Ozi nke F-14 bụ iji chebe ugbo elu ụgbọelu agha atụ bọmbụ, n'ihi ya, ọ na-onwem na ogologo nso ụta na a dị ike Rada.
The F-14 bụ a ejima-engine abụọ oche-variable jiometrị: ọ nwere ike na "ịdọrọ" ya nku pivot isi na onu ire kwesịrị ekwesị ka fuselage. Ọ adapts ya aerodynamic ọnọdụ transonic na supersonic gbapụrụ ọsọ (nku apịaji) ma ọ bụ ala gbapụrụ ọsọ n'oge obibia na Dogfight (nku apịaji). Ọ wara site a tandem pilot na mara tupu cocking azụ. Nke a dabeere na F-4 phantom II ma na-enye arụmọrụ ike mgbanwe. (Wikipedia)
Onye edemede: Jeff Dobbing (ihe gaa faịlụ readme)
Bae Systems egbe T.1X FS2004